ngcono okuqhubekayo kwezindlela emazinga ekuphila ngempela kuhilelani ekuphuculeni izinhlelo ezehlukene ukuqinisekisa ke. Ukwakhiwa indle kwezindlu edolobheni nezakhiwo akanandaba e umuzi wonke waphuma namuhla kunanini ngaphambili. Ukuze ugweme ukungcoliswa imvelo, ukukhiqizwa ukhiqiza esiyingqayizivele ukwelashwa izindawo, phakathi zazo ikakhulukazi ukugqamisa "Microbe". tank Septic yalolu hlobo senzelwe ukusebenza e isivakashi izindlu, izindawo zesikhashana yokuhlala, Villas, zokugeza nezindlu ukuze sithole isivikelo. Kodwa lokhu akulona uhlu oluphelele ukusetshenziswa emkhakheni. I-apharathasi izindlu has a amandla okusezingeni eliphezulu ngenxa amasu yokukhiqiza, ngoba design kusekelwe okusezingeni eliphezulu kwabantu polyethylene.
Kaningi, ezikhathini zamuva abathengi yena uyokhetha ukuba elashwe izindawo "Microbe" onobuhle lolu hlobo ithangi ukonakala usebenza ezimisweni ezithile, okuyinto, njengoba umthetho, izithakazelo abathengi, okuyinto azokwenza umsebenzi inhlangano. Effluents kusukela engenayo indle ukuwa ipayipi ukuze isitsha sokuqala lapho amanzi bahlanza of ukungcola okuqinile izinhlayiya kahle esikhulu. Kuye ukushintshwa iziqukathi ingaba eziningana. Ngaphezu kwalokho ukungcola awela ethangini yesibili lapho siqalile ukusebenza izihlungi begazi. Abakhiqizi amathangi ukonakala yohlobo echazwe sebelithathile njengesisekelo isenzo amagciwane ifaniswe ne okuhlushwa lesifanele. Ukubalwa alawa magciwane Kwenziwa Uchwepheshe lemali obanele of amagciwane aerobic ngeke bakwazi ukuqinisekisa ukusebenza evamile, lokho kuyoholela ekukhuleni ngokweqile sabantu kuzokwenza kumiswa ngokweqile igesi ivolumu kanye ukuvutshelwa ukugqanyiswa.
Ukuze inzalo ephelele amanzi angcolile kumele kube mayelana 2-5 izinsuku, kuya ngevolumu futhi imvamisa kabusha. Uma udinga akunika ukwelashwa isitshalo, ungakhetha "Microbe". tank Septic yalolu hlobo sakhiwa aftertreatment ukungcola zokuhlunga. Uma izinyathelo ezingenhla ngeke kukho ukungcola ipayipi engenayo zifika Infiltrator. Kungaqukatha amatshe nesihlabathi. Ukunqoba lezi zinto, uketshezi ebugqilini zonke izinhlobo izinhlayiya okuyinto azisuswanga kuze kube yilo mzuzu ne ithangi ukonakala. Kwezinye onobuhle, setha okukhipha yesihlungi okuvumela ukubhubhisa iminonjana ukuphila-bacterium ngaphambi kwamanzi okungena inhlabathi. Abathengi ngempela efana "lwegciwane" zedivayisi, ithangi ukonakala yalolu hlobo engabondli abakubo isidingo ukudonsa ezengeziwe indle, kodwa ngeke kusadingeka ukuba ngezikhathi disinfected. Ngenxa yalesi akakwamukeli ukusebenzisa ejenti elwa namagciwane kanye yizici zamakhemikhali. Ukuhlanza ukuhlunga futhi phansi ethangini ukonakala kungaba kwenziwe usebenzisa imishini ekhethekile ngeke bakwazi ukulimaza amagciwane.
Yini enye okudingeka ukwazi mayelana ekusebenzeni isimiso
Ngaphambi kokuba uthenge le imishini kumele wazi ukuthi ukudonsa amathangi ukonakala yalolu hlobo wenziwa. Ukufakwa umsebenzi ngesisekelo izinqubo ezimbili: okokuqala okushiya kuthiwa wagomela, futhi ngemva kokuqala uxhumana amagciwane anaerobic. Ekugcineni amanzi usule-85%, kodwa lokhu degree Nokho, alanele, ngaphezu imishini inamathelisiwe amanzi emithonjeni nge filtration ehlangene. Kungenjalo aphume ashone filtration ensimini.
Izibuyekezo imifanekiso ezihlukene zokwelashwa amanzi izindawo "Microbe"
Namuhla okudayiswayo ethulwa izinhlobo ezilandelayo ukonakala uphawu "bacterium": 450, 600, 750, futhi 900. Ukuze ukwazi ukubona lapho ukukhetha ukufakwa, kubalulekile ukuba sicabangele ezibekiweko ngamunye. Uma ufuna ukukhetha okungcono ithangi ukonakala ukunikeza, ungasebenzisa model of the "Microbe-450", esetshenziselwa ukwakha, inabantu 2. Udonga ukushuba 10 kwangu, okuyinto kwanele ukuqina elikhulu kanye namandla we izindlu. Tank umthamo 0.45 cubic metres, futhi isisindo imishini 35 amakhilogramu, yingakho ungakwazi ukuyifaka wena.
Septic "bacterium-450" uzobe bahlanza 150 amalitha ngosuku emfantwini. Abathengi belulekwa ukuba ukubala kusengaphambili ukuthi isikhala esiningi kuyadingeka ukuze ukufakwa. Ngakho, imodeli echazwe unamahlangothi ka 810x1430 mm. Lokhu kukhomba ikhono ukubeka imishini endaweni encane izwe. Ukusebenza kuyoba okwanele ukukhonza endlini yezwe.
Uphenyo imodeli "Microbe-600"
Nale kokuhlela, ungenza ukuhlanza 200 amalitha ngosuku, nakuba ubukhulu idivayisi kuyinto 910x1430 mm. Uma uhlala endlini 2 abantu abangaphezu kuka esimweni ezingenhla, ochwepheshe ukweluleka ukuthenga ithangi ukonakala, ogama umthamo 0.6 cubic metres. Le divayisi ngaphezu kwalokho ifakwe ithangi, esinikela uhlanzekile double kwendle esebenzisa izihlungi microbiological. Umzimba wenziwe lukathayela impahla plastic, kuyilapho ukushuba odongeni ejwayelekile futhi 10 kwangu.
Njengoba abasebenzisi ulwe ukuze umndeni encane kufanelekile imodeli 750, okuyinto ehlukile eziphansi kanye ngokuphelele ubhekana amanzi khulula. Ukusingathwa nahlanza ku-75%, kanti umthamo yokuhlala 750 amalitha amanzi. Ngaphezu kwalokho, kule divayisi ifakwe ukupholisa kampompi nge uxhumano yokuxhuma Infiltrator. Abathengi belulekwa ukuba ukuthenga ithangi ukonakala "Microbe-900", uma umkhaya waba abantu 5. Le modeli singesikhulu kunazo zonke kwezingu lonke line, futhi kungaba ukuhlanza 0.9 cubic metres kwendle. Umkhiqizi kuphela kule imodeli kwenza Infiltrator njengesipho. umthamo okulingana ububanzi angamamitha angu-1.5, kanti ukuphakama kwalo ilingana imitha elilodwa.
Amazwana ngezici eziyisisekelo ithangi mini ukonakala
Septic "Microbe", ukubuyekezwa okungase akuvumela ukuthi ukhethe ukwahlulelana, ngokuvumelana abasebenzisi, has eziningi eziwusizo phezu enye indlela yokwelapha izinhlelo. Okokuqala, kufanele kwenziwe isisindo ukukhanya kalula abebeziphilisa ngako. Kufanele kuqashelwe usayizi sasivumela icwecwe futhi ngemali ephansi. Ukukhiqiza imishini kuphezulu, okuyinto kwahambisana ukungabi isidingo ukuxhuma ugesi. Amalungu kuqashelwe ukuthi imishini akudingi supply njalo umoya-mpilo.
Umthengi Izibuyekezo mayelana nezici zokukhwabanisa ngemuva kokufakwa
Ngemva ethangini mini-ukonakala ifakiwe, ukuhambisa ngokujulile phansi ezingaphezu kuka 1 imitha kusuka phezulu umkhiqizo kuya zero uphawu kwenhlabathi akuvunyelwe. Lapho sigcwalisa esitsheni engamukeleki ukusebenzisa izinto zokwakha. Njengoba umkhuba ubonisa, inhlabathi compaction kungabangela ukulimala plastic. Ngakho-ke abasebenzisi abanolwazi bathi kufanele ukuyeka ukusebenzisa imishini ukwakhiwa lapho titibonelo letinkhulu tekuvumelana inhlabathi. Ngenhla eziqhutshwa ithangi ukonakala Kunconywa ukuqeda ukudlula ezokuthutha. Uma kucatshangwa ukuthi phezu kobuso bomhlaba zizonikezwa kunoma umthwalo, phezulu ligcwele 25-isentimitha endaweni nensimbi. Abanikazi izindlu zangasese, kabani endaweni isethi echazwe uhlelo yokuhlanza, baphikisa ngokuthi Imithi etshalwe eduze amamitha amathathu kusukela indawo imishini akuvunyelwe. Khweza endaweni isihlungi kuyadingeka, lisuka amamitha angu-15 noma ngaphezulu emithonjeni nemithombo.
Ukudonswa kwalawo manzi we "lwegciwane" amathangi ukonakala ayidingekile ngesikhathi ukusebenza, yingakho akusadingeki ukuchitha imali emva kokufakwa. Uma namanje abazange onjani uhlelo ukwelashwa efakwe endaweni endaweni suburban isinqumo, kufanele ujwayelene izindleko. Njengoba abathengi bathi kwamukeleka ngempela. Ngokwesibonelo, model of "Microbe-450" kuwufanele ruble 10,000, kuyilapho "Microbe-600" - ruble 13,000. Leyo mikhumbi ezimbili ezilandelayo emgqeni kukhona ruble 14000 futhi 16000. ngokulandelana. Abanikazi bezindawo bathi akuyona njalo ukufakwa umsebenzi nethuba ukukhiqiza bebodwa. Uma lokhu zivunyelwe ukuba zithathe ngosizo izingcweti ukusungula izindawo ukwelashwa ruble 7500-12000. Intengo yokugcina kuzoncika imodeli, kusukela ubukhulu nesisindo zihlukile. Kepha kukho "Microbe-600" futhi 750, bese ukufakwa yabo kufanele ukhokhe ruble 9,000 no-10,000. ngokulandelana.
Ukubuyekezwa Ukuthwala aphume ukufakwa kwemisebenzi
Uma unquma ukwenza ukufakwa yakho siqu zalesi sihlahla ukwelashwa, amba umsele nge lokwela noma ngosizo imishini ekhethekile. Ubukhulu bayo ziyahlukahluka kusuka 30 kuya 40 amasentimitha, okuyinto kuzoncika model of imishini esetshenziswa. Uma umsebenzi omele wenziwe endaweni ubuswa isihlabathi noma ezinye inhlabathi eyomile ke ezansi udinga babeka 15-isentimitha isihlabathi embhedeni, okuyinto kahle ohlangene futhi kuqondiswa. Abasebenzisi belulekwa ukuhlomisa usimende pad, uma eduze kwamanzi nokugeleza komhlaba.
Ukuphakama base kufanele kube okufanayo njengoba kwaba njalo endabeni engenhla. Ngemva kokuphela yonke imisebenzi wokulungiselela ithangi ukonakala ingafakwa endaweni, yokuxhuma uxhumano abakhwabanisi.
Kanjani ukuzenzela okwakho izandla spinerbaits
Umdlalo we-PES. Indlela yokufaka i-PES ku- "Android"
Uma i-throat ebomvu enganeni, kunokwelapha?
Izinkulisa Private (Mytishchi). Lapho kangcono ukuthumela ingane